लामो हिडाई `पञ्चासे´को
byShyam Rana magar - November 19, 2020
पञ्चासेलाई एक फेरो लगाएर भर्खरै भदौरे आइ पुगे । तपाईहरुले पहिल्यै थाहा पाई सक्नु भएको छ । किन भने मैले पहिल्यै जानकारी गराई सकेको छु । समुद्री सतहदेखी २५ सय मिटर उचाईमा रहेको पञ्चासे पुग्न गाह्रो हो । यहाँ पुगि सकेपछि त कुरै छोडौ । साह्रो मज्जा आउदो रहेछ नि ! बाफ्रे, हिड्न पनि कम हिडियो र !लगातार ११ घण्टा लामो हिडाइले खुट्टा साह्रै गलेका छन् । करिबन २० किलोमिटर आज पैदल हिडिएछ । जीवनमा अनुभव गर्न पाइयो । माइ लर्ड, शरीर त जता छोयो उतै दुख्छ त ले ।
आज ब्लग लेख्न पनि मलाई एकदमै गाह्रो भई रहेको छ । तर, पनि तपाइँहरु सँग भलाकुसारी गर्नु त छ नै ! छोटै भए पनि बात मारौ भनेर नि !
जीवनमा यति लामो हिडाई मैले कहिले हिडेको थिइनँ । यो हिडाइ हिड्न मलाई जति गाह्रो भयो । त्यो भन्दा बेसि मज्जा यात्राका रमाइला किस्सा सुनाउन हुने छ नै ! अहिलेलाई म गुड नाइट हुन्छु । भोलि बिहानै पोखरा खाल्डो झर्नु छ । बाँकी बात भोलि मारौला नि त है !